फ्रिजमा अण्डा राख्नु हुन्छ ? त्यसो भए सावधान ! - Everest Dainik - News from Nepal
फ्रिजमा अण्डा राख्नु हुन्छ ? त्यसो भए सावधान !
मानिसहरुले दैनिकरुपमा अण्डा सेवन गर्न पर्नेमा चिकित्सकहरु जोड दिने गर्छन् । यदि तपाई अण्डा खानुहुन्छ र तिनलाई फ्रिजमा राख्नुहुन्छ भने सावधान ! किनभने यहाँ लेखिएका कारण थाहा पाएपछि तपाईंले कहिल्यै पनि फ्रिजमा अण्डा राख्नु हुने छैन । फ्रिजमा अण्डा राख्दा त्यसको बोक्रामा रहेका ब्याक्टेरिया स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुनसक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस फेरि बढ्यो अण्डाको मूल्य
कोठाको तापक्रममा राखिएको अण्डाहरू धेरै दिन टिक्छन् । जबकि फ्रिजमा राखिएको अण्डा उमाल्दा छिटै टुट्ने सम्भावना हुन्छ । यसैगरी केक बनाउनका लागि पनि फ्रिजमा राखिएको अण्डा सही हुँदैनन् । यसरी राखिएको अण्डालाई सही किसिमले फेट्न सकिन्
अण्डा मांसहारी की शाकाहारी ??? यस्तो आयो बैज्ञानिकको भनाई
याे पनि पढ्नुस दूधपछि बढ्यो अण्डाको मूल्य, यस्तो भयो निर्णय
विश्वमा आज पनि अण्डा पहिले निस्कियो की कुखुरा ??? अण्डा मांसहारी की शाकाहारी भन्ने प्रश्नको जवाफ आजसम्म कसैले दिन सकेका छैनन् ।
याे पनि पढ्नुस कुखुराजन्य उद्योगमा १८ अर्बको नोक्सानी
ट्याग्स: Egg in refrigerator, अण्डा